दाँतलाई किरा लाग्नबाट कसरी जोगाउने ? « Mero LifeStyle
दाँतलाई किरा लाग्नबाट कसरी जोगाउने ?
मेरो लाइफस्टाइल	||9July, 2021
सफा दाँतले मानिसको व्यक्तित्व झल्काउँछ । त्यसैले दाँतलाई सफा राख्न अत्यन्तै जरुरी हुन्छ । यदि दाँत सफा भएन भने विभिन्न समस्या देखिन्छ । त्यसमध्ये किरा लाग्नु पनि एक प्रमुख समस्या हो । दाँतलाई किरा लाग्नबाट कसरी बचाउने भन्ने विषयमा दन्त रोग विशेषज्ञ डा. श्यामकुमार महर्जनको सुझाव यस्तो छ :
दाँत किराले किन खान्छ ?
खानेकुराहरू खाएपछि दाँत नमाझिकन या कुल्ला नगरी छोड्ने बानीले दाँतमा किराले खाने रोग बढेको छ । गुलिया खानेकुरामा दाँतमा जम्मा भएपछि व्याक्टेरिया निस्कन्छ र दाँत किराले खान्छ । त्यस्ता खानेकुरा टाँसिइरहेपछि एसिड निकाल्छ र त्यही वृद्धि भएर दाँत किरामा किरा लाग्ने समस्या निम्तिन्छ ।
दाँतमा कालो दाँग देखिएमा दाँतमा किरा लागेको हुन सक्छ । गुलियो, तातो र चिसो खानेकुरा खादा दाँत सिरिङ्ग गरेमा वा दुखेमा पनि दाँत किराले खाएको हुन सक्छ । त्यसैले यस्ता केही समस्या देखिने बित्तिकै दन्त चिकित्सकको सल्लाह लिनु पर्छ ।
सुरुमै समस्या पत्ता लाग्यो भने त्यसको उपचार पनि सहज हुन्छ । तर, हेल्चेक्राईँ गरेर बस्दा समस्या धेरै बढ्न सक्छ र दाँत नै निकाल्नु पर्ने अवस्था पनि आउँछ ।
– दाँत किराले खानु वा बिग्रिनुको मुख्य कारण दाँतको स्याहार नगरेर हो । दैनिक रूपमा बिहान–बेलुका दाँत सफा गर्ने गरेमा किराले खाँदैन ।
– फ्लोराइडयुक्त दन्तमन्जनले दिनमा दुईपटक दाँत सफा गर्ने तथा खाना खाएपछि पानीले राम्ररी कुल्ला गर्ने ।
– गुलियो खाने कुराहरू जस्तै, चिनी, चकलेटको प्रयोग काम गर्ने ।
– वर्षमा दुईपटक दन्तचिकित्सकलाई दाँत देखाउने ।
– ब्रस गर्दा दाँतमा अड्किएको सबै खानेकुरा बाहिर ननिस्किएको हुन सक्छ त्यसैले दाँतलाई डेन्टल फ्लसको प्रयोग गरेर सफा गर्नु पर्छ ।